Why cannot use Wireless in Ubuntu 11.04? - MYSTERY ZILLION
hanmyohtwe April 2011 edited April 2011 in Ubuntu မနေ့က Ubuntu ကို Upgrade လုပ်လိုက်တာ Wireless မရတော့ ဘူး။ ပြီးတော့ Network မတတ်ထားရင် Ubuntu က တက်မလာတော့ဘူး စာတန်းတွေဘဲပေါ်လာတယ်.....ကူညီကြပါ။။။ Tagged:
Morris May 2011 Moderators upgrade လုပ်တာကဒီလိုပဲဗျ။ ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။ အမှန်မှန်က upgrade လုပ်မယ့်အစား clean install လုပ်သင့်တာ ကိုယ်သွင်းထားတဲ့ program တွေပါပြန်လိုချင်ရင်တော့ backup လုပ်ထားပေါ့။ ဒီတိုင်း backup မလုပ်ချင်ရင်လည်း script လေးရေးတာဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ကရှာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ phoelay May 2011 Registered Users ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Ubuntu forum မှာ bug report လုပ်ပါ။ Wireless Driver ကို support မလုပ်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ဗားရှင်းတွေ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလဲ ဖြစ်နေတုန်းပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ update release လုပ်တိုင်း update လုပ်ပါ။ update တွေက အဲ့လို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။။ saturngod May 2011 Administrators try $sudo apt-get update$sudo apt-get upgradeit may automatically detect and will install. but not sure. I don't recommend upgrade in Ubuntu. Clean install is the best. IT_KOKO May 2011 Registered Users Now My wireless is ok on Ubuntu.I did $ sudo rmmod acer_wmi	in terminal. IT_KOKO May 2011 edited May 2011 Registered Users အမြဲ​တမ်း ပြန်​ရိုက်​နေ​ရ​တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? saturngod May 2011 Administrators IT_KOKO said:အမြဲ​တမ်း ပြန်​ရိုက်​နေ​ရ​တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? System>preferences>sessions မှာ သွားထည့်ထားလိုက်ရင် ရမယ်။ IT_KOKO May 2011 Registered Users sessions ကိုရှာမတွေဘူး.. Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla